Kuwa kale Warshad, Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha Kuwa kale Soo-saareyaal
Sharaxaadda Badeecada: Dadka isticmaala mashiinka barafka ganacsiga yar yar iyo macaamiisha u isticmaali kara barafka si joogto ah soo noqnoqoshada maalintii, uma baahna inay keenaan nidaamka qaboojiyaha qolkooda barafka lagu keydiyo Qolka weyn ee barafka lagu keydiyo, unugyada qaboojiyaha ayaa looga baahan yahay inay ahaadaan heerkulka gudaha oo laga jaray sidaas darteed barafka waxaa lagu hayn karaa gudaha iyada oo aan dhalaalin muddo dheer. Qolalka barafka waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo barafka jajaban, barafka xannibaadda, tuubooyinka barafka ku jira iyo wixii la mid ah Astaamaha: 1. Iskuxirka dahaarka guddiga kaydinta qabow ...
Sharaxaadda Badeecada: Mashiinka xirmooyinka barafka ee Herbin wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood: quudinta, miisaamidda, xirxirida. Awoodda dynamo oo keliya, fur barafka gudbiya. Waxaan u heellan nahay inaan ku siino mashiin wax lagu duubo oo fudud oo lagu kalsoonaan karo. Astaamaha: Qaab dhismeedka fudud, miisaanka fudud, gaadiidka habboon. Dhammaan iskuxirnaanta waxaa daboolaya birta birta ah ee 304, oo gebi ahaanba waafaqsan heerka nadaafadda cuntada. Qaabdhismeedka nidaamka dhammaantood waxay isticmaalaan noocyo caan ah.
Sharaxaadda Badeecada: Herbin waxay siisaa qalab jajabinta barafka burburinta barafka, tuubooyinka barafka, iyo wixii la mid ah. Barafka ayaa lagu jajabin karaa qaybo yaryar ama xitaa budo. Barafka la jajabiyey wuxuu la kulmi karaa heerka nadaafadda cuntada haddii macaamilku sidaas u baahdo. Astaamaha: Qolofku wuxuu ka samaysan yahay saxan bir ah iyo bir bir ah, si loo hubiyo muuqaal qurxoon oo qurux badan. Naqshadeynta qaybsan ayaa sahlaysa in la shaqeeyo. Hufnaan sare iyo nolol adeeg dheer. Waxaa sameeyay bir bir ah 304. Geedi socodka baraf-shiisha ...
Qalabka bacaha barafka waxay la kulmaan heerka nadaafadda cuntada, kaas oo dammaanad qaadaya barafka tayada cuntada. Boorsooyinka barafka ee leh cabirro kaladuwan ayaa la heli karaa, kuwaas oo loo habeyn karaa iyada oo loo eegayo muunadda macaamiisha. Macluumaadka ganacsiga ee leh astaamo kala duwan ayaa lagu daabacan karaa boorsooyinka. Boorsooyinka hufan ee bilaa daabaca ah ayaa ugu jaban.